Okusanda izimfudu cishe sekube the ezifuywayo ethandwa kakhulu. Abazali abaningi uzithenge izingane zabo njengoba amathoyizi ophilayo. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi okuningi silwane isikhala endlini enakekela kuye akunzima, kuba njalo buthule, udle kancane, ukulala okuningi - ngamafuphi, isilwane ephelele. Nokho, akubona bonke ngakho elula. Ngaphambi kokuba uthenge ngokwesibonelo, isilwane esihuquzelayo, kubalulekile ukuthola ukuthi yini zinhlobo kungokwalabo, ngaphansi kwaziphi izimo kufanele lihlale kuyo. Kungaba kuhle ukwazi kusengaphambili ukuthi yini abayidlayo izimfudu njengoba ukuchitha yokuzilibazisa isikhathi sabo, lapho lonke.
impilo isilwane sika incike zezemvelo. Awezinyoka akufanele ibekwe ebhokisini eduze, kungakuhle kakhulu-ke kufanele kube terrarium ingilazi, noma okungenani ibhokisi plastic. Ufudu mobile, ngakho ezindongeni zendlu kufanele ibe ngaphezu ubude igobolondo okungenani kahlanu. Ukuze akhule kahle lamathambo, badinga ukukhanya, ngakho-ke kufanele sihlale ezihuquzelayo ngaphansi Isibani sikagesi, okuyinto elizoba heater, futhi uma indlu abandayo.
Vegetable ukudla - wukuthi ukudla izimfudu zonke izinhlobo. Yiqiniso, kuye ngokuthi isimo sendawo ukuhlala utawubhalwa futhi imenyu. Ngokwesibonelo, ezihuquzelayo, njengoba babehlala ezindaweni eziswakeme, udle hhayi kuphela utshani futhi izithelo, kodwa futhi ukudla okuvela ezilwaneni. Awezinyoka kusukela ezomile izindawo kudle imifino kuphela, izithelo nezitshalo. Kubalulekile ukuba bazi ukuthi yini ukudla izimfudu sikhule isilwane enempilo neselula.
ukudla Self-ukulinganisela ngesinye isikhathi kunzima ukukhuluma ngalolu daba ungaxhumana wezilwane wakho. Lo chwepheshe uzokutshela ukuthi kufanele ibe silwane, futhi kulokho kobukhulu. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi ufudu ngokwanele kanye ngesonto ukunikeza leaf ulethisi kanye nalo lonke isikhathi yena uyalala, kodwa akuyona. Ukudla kufanele kube ezihlukahlukene futhi aqukethe inani eliphezulu izakhi ezibalulekile. I izimfudu okuphakelayo ehlobo, ngakho-ke okusabhontshisi, wakha izimbali zasendle utshani, amahlamvu nezihlahla. In autumn bayajabula ukunambitha ipheya, ijikijolo, amajikijolo ezivuthiwe nezinye izithelo seedless.
Abanye abanikazi abangamazi ukuthi izimfudu ukudla, ukunikeza izilwane inja noma ikati okusemathinini ukudla, pasta, ilayisi, kodwa mikhiqizo ayifanele umzimba wabo. Sezilwane ezihuquzelayo kufanele kube utshani ondliwe amahlamvu, izithelo namanzi, izithelo kanye nemifino, ezinye zazo ungadla izimbungulu, izimpethu, iminenke. Njengoba kuvunyelwe ngezikhathi ezithile ukunika ezihuquzelayo ofakwe ukudla eyomile amakati, kodwa hhayi ukuthola bahileleke kukho.
Kubalulekile ukwazi ukuthi yini ludinga ukunceliswa, kodwa futhi kungakanani udla ufudu umhlaba. inqubo agayeke ezihuquzelayo Kuthatha cishe inyanga nesigamu, ngakho-ke kumelwe udle njalo kodwa izingxenye ezincane. Ukuze isilwane akuyona Ukhethe ukuphuma imikhiqizo umkhombe-ayethanda kubalulekile ukuba ugaye noma fake usike zonke izingxenye ukudla, bese uxhuma nabo. Ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe ekudleni izimfudu ezincane, ngoba engayitholi ukungadli amavithamini kungakhinyabeza ekuthuthukeni kwabo.
Kungani isidingo vitamin B12, okuyindawo akwenzayo?